Ithini IBhayibhile Ngobomi Nokufa?
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI IPidgin yaseSolomon Islands ISepedi ISidama ISilozi ISpanish Isi-Iban Isi-Ibanag Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Isoko Isi-Itali IsiAcholi IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAukan IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBaoule IsiBashkir IsiBatak (SaseKaro) IsiBatak (SaseToba) IsiBhulu IsiBiak IsiBicol IsiBislama IsiBulgarian IsiCambodia IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitonga (SaseMalawi) IsiChitumbuka IsiChiyao IsiChokwe IsiChol IsiChuvash IsiCibemba IsiCinyanja IsiCreole saseHaiti IsiCreole saseMauritius IsiCreole saseSeychelles IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiDigor IsiDrehu IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFon IsiFrentshi IsiGa IsiGarifuna IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiGujarati IsiGun IsiHausa IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHiri Motu IsiHmong (White) IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiJavanese IsiKabiye IsiKannada IsiKaren (SaseS'gaw) IsiKazakh IsiKikamba IsiKikaonde IsiKikongo IsiKikuyu IsiKiluba IsiKimbundu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKiribati IsiKirundi IsiKisonge IsiKongo IsiKorea IsiKurdish Kurmanji (SaseCaucasus) IsiKurdish Kurmanji (sesiCyrillic) IsiKwangali IsiKwanyama IsiLhukonzo IsiLingala IsiLithuania IsiLomwe IsiLuganda IsiLunda IsiLuo IsiLuvale IsiMacua IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMaltese IsiMam IsiMambwe-Lungu IsiMapudungun IsiMarathi IsiMaya IsiMazatec (sesiHuautla) IsiMbunda IsiMongolia IsiMoore IsiMyanmar IsiNahuatl (saseGuerrero) IsiNahuatl (saseHuasteca) IsiNahuatl (saseNorthern Puebla) IsiNavajo IsiNdebele IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNdonga IsiNepali IsiNgangela IsiNgesi IsiNias IsiNiuea IsiNorway IsiNyaneka IsiNzema IsiOromo IsiOssetia IsiOtetela IsiPangasina IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiQuechua (saseAncash) IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseBolivia) IsiQuechua (saseCuzco) IsiQuichua (SaseImbabura) IsiRashiya IsiRomania IsiRunyankore IsiRutoro IsiSamoa IsiSango IsiSaramaccan IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSesotho (South Africa) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwati IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiTetun Dili IsiThai IsiTigrinya IsiTiv IsiTojolabal IsiTok Pisin IsiTongan IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTshwa IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiTzeltal IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUmbundu IsiUrhobo IsiUruund IsiVenda IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiWayuunaiki IsiWolaita IsiXhosa IsiYoruba IsiZande IsiZulu isi-Igbo isiWallisian
INQAKU ELINGUMXHOLO | ITHINI IBHAYIBHILE NGOBOMI NOKUFA?
Kwingxelo yendalo ekwiGenesis, sifunda ukuba uThixo wathi kwindoda yokuqala, uAdam: “Kuyo yonke imithi yomyezo ungadla wanele. Kodwa wona umthi wokwazi okulungileyo nokubi uze ungadli kuwo, kuba mhla uthe wadla kuwo uya kufa ngokuqinisekileyo.” (Genesis 2:16, 17) Loo mazwi abonisa mhlophe ukuba uAdam wayengazukufa ukuba wayemthobele uThixo kodwa wayeza kuqhubeka ephila kumyezo wase-Eden.
Okulusizi kukuba, endaweni yokukhetha ukuthobela ukuze aphile ngonaphakade, uAdam wakhetha ukungawuthobeli umthetho kaThixo. Watya isiqhamo somthi awayesinikwa ngumfazi wakhe uEva, ababengavumelekanga ukuba batye kuwo. (Genesis 3:1-6) Sisathwaxwa yimiphumo yokungathobeli kwabo nanamhlanje. Umpostile uPawulos wayichaza ngale ndlela le nto: “Isono sangena ngamntu mnye ehlabathini nokufa ngaso isono, ngaloo ndlela ukufa kwasasazeka kubo bonke abantu ngenxa yokuba bonke bonayo.” (Roma 5:12) Loo ‘mntu mnye’ yayinguAdam ngenkqu. Kodwa sasiyintoni isono ibe kwakutheni ukuze sibangele ukufa?
Ukungathobeli kuka-Adam okanye ukwaphula umthetho kaThixo ngabom, kwaba sisono. (1 Yohane 3:4) Isohlwayo sesono kukufa, kanye njengokuba watshoyo uThixo kuAdam. Ukuba uAdam nenzala yakhe babewuthobele umthetho kaThixo, babengazukuba nasono ibe babengazukufa. UThixo akazange abadalele ukuba bafe abantu kodwa wayefuna baphile ngonaphakade.
Asinakuyiphika into yokuba ukufa “kwasasazeka kubo bonke,” njengoko yatshoyo iBhayibhile. Kodwa ngaba ikho into eqhubeka iphila xa sisifa? Abanye basenokuthi ewe, umphefumlo wona awufi. Le nto ibiya kuthetha ukuba uThixo waxoka kuAdam. Ngoba? Kuba xa sinento eqhubeka iphila kwenye indawo emva kokuba sifile, loo nto ithetha ukuba ukufa akusiso isohlwayo sesono, njengokuba uThixo watshoyo. IBhayibhile ithi: ‘Akunakwenzeka ukuba uThixo axoke.’ (Hebhere 6:18) Inyani kukuba, nguSathana owaxokayo kuEva esithi: “Ngokuqinisekileyo anisayi kufa.”​—Genesis 3:4.
Xa kunjalo ke umbuzo ngulo, ukuba ibubuxoki into yokuba umphefumlo awufi, kwenzeka ntoni kanye kanye xa umntu efile?
IBHAYIBHILE ISIXELELA EYONA NYANI
IGenesis ithi ngendalo: “Wandula ke uYehova uThixo wabumba umntu ngothuli lomhlaba waza wavuthela impefumlo yobomi emathatheni akhe, umntu ke waba ngumphefumlo ophilayo.” Ibinzana elithi ‘umphefumlo ophilayo [umntu ophilayo]’ liguqulelwe kwigama lesiHebhere elithi, ne’phesh, * ngokoqobo elithetha ukuthi “isidalwa esiphefumlayo.”​—Genesis 2:7.
IBhayibhile yenza kucace ukuba abantu abadalwanga benomphefumlo ongafiyo. Endaweni yoko, mntu ngamnye “ngumphefumlo ophilayo.” Noba ungakhangela kweyiphi iBhayibhile, soze ufumane ndawo ithetha “ngomphefumlo ongafiyo.”
Ekubeni kungekho ndawo ithetha ngomphefumlo ongafiyo eBhayibhileni, kutheni iinkonzo ezininzi zifundisa ngawo? Impendulo isibuyisela kwiYiputa yakudala.
UKUNWENWA KWEMFUNDISO YOBUHEDENI
UHerodotus, umbhali-mbali ongumGrike owayephila kwiminyaka yoo-400 wathi “abantu bokuqala abamela into yokungafi komphefumlo” yayingamaYiputa. Abanye abantu bakudala ababezonwabisa ngale nto yokungafi komphefumlo, ngamaBhabhiloni. Xa uAleksandire Omkhulu woyisa amazwe akuMbindi Mpuma ngo-332 B.C.E., iintandabulumko zamaGrike zazisele zizalise ngale mfundiso kubo bonke uBukhosi bamaGrike.
Soze ufumane ndawo ithetha “ngomphefumlo ongafiyo” eBhayibhileni
Kwinkulungwane yokuqala, amaqela amabini aziwayo eenkonzo zamaYuda, amaEssene nabaFarisi, afundisa ukuba umphefumlo awufi xa umntu esifa. IThe Jewish Encyclopedia ithi: “Yimfundiso yamaGrike eyabangela ukuba amaYuda akholelwe ekubeni umphefumlo awufi, kodwa eyona nto yayifaka kakhulu le nkolelo yintanda-bulumko kaPlato.” Nombhali-mbali wenkulungwane yokuqala, uJosephus ongumYuda wayidibanisa le mfundiso “nenkolo yoonyana baseGrisi,” kungekhona neZibhalo Ezingcwele, futhi wayesithi lelinye lamabali obuxoki.
Njengoko abantu abaninzi babezamkela iimfundiso zamaGrike, nabo bazibiza ngokuba ngamaKristu bayithathela kubo le mfundiso. Umbhali-mbali uJona Lendering wathi, “Imfundiso kaPlato yokuba umphefumlo wawukhe wakwindawo ephakamileyo ibe ngoku ukwihlabathi eliwohlokileyo, yenza kwalula ukudibanisa intandabulumko kaPlato nobuKristu.” Ngenxa yoko, le mfundiso yobuhedeni yokungafi komphefumlo yangena nakwicawa “yobuKristu” yaza yabaluleka ngaphezu kwazo zonke ezinye iimfundiso.
“INYANISO IYA KUNIKHULULA”
Kwinkulungwane yokuqala, umpostile uPawulos walumkisa wathi: “Ilizwi eliphefumlelweyo lithi ngokuqinisekileyo kuya kubakho ixesha laxa abathile beya kuphambuka elukholweni, benikela ingqalelo kumazwi aphefumlelweyo alahlekisayo nakwiimfundiso zeedemon.” (1 Timoti 4:1) Kuye kwacaca ukuba yinyani kwala mazwi. Imfundiso yokungafi komphefumlo ngomnye wemizekelo ‘yemfundiso yeedemon.’ IBhayibhile ayithethi ngayo, ibe ivela kwiicawa zakudala zobuhedeni neentandabulumko.
Thina ke siyavuya kuba uYesu wathi: “Niya kuyazi inyaniso, yaye inyaniso iya kunikhulula.” (Yohane 8:32) Ukwazi eyona nto ithethwa yiBhayibhile, kusenze sakhululeka kwiimfundiso ezimdelelayo uThixo ezisasazwa ziicawa zeli hlabathi. Ngaphezu koko, iBhayibhile isikhulula kumakhamandela ezithethe neentsomi ezithethwayo ngokufa.​—Funda ibhokisi ethi, “ Baphi Abafileyo?”
UMdali wethu akazange asidalele ukuba siphile iminyaka eyi-70 okanye eyi-80 emhlabeni size siye kuphila ngonaphakade kwenye indawo. Wayefuna siphile ngonaphakade apha emhlabeni, simthobele. Injongo yakhe ibonisa ukuba uyasithanda ibe ayisoze inqandwe mntu. (Malaki 3:6) Umdumisi usenza singakuthandabuzi oko xa esithi: “Amalungisa aya kuwudla ilifa umhlaba, ahlale kuwo ngonaphakade.”​—INdumiso 37:29.
^ isiqe. 9 Ezinye iinguqulelo zeBhayibhile, njengeBhayibhile YesiXhosa ka-1975, yona iguqulela igama elithi ne’phesh ngokuthi “umphefumlo ophilayo,” ngoxa iBhayibhile YesiXhosa ka-1996 iliguqulela ngokuthi “umntu ophilayo.”
Ngaba Abantu Bangaphila Ngonaphakade?
Abaphandi baye bafumana izityalo ezikhula phantsi kwamanzi abacinga ukuba ziphile amawaka eminyaka. Bathi ayikho enye into ephile ukodlula zona. Lo ngomnye umhlobo wezityalo ekuthiwa yiPosidonia oceanica. Le ngca inabe ngaphantsi kolwandle iMeditera konke ukusuka eSpeyin ukuya kutsho eSipro.
Ukuba izityalo ziyakwazi ukuphila loo minyaka, kuthekani ngabantu? Abanye oososayensi abaphanda ngokukhula banethemba lokuba abantu bangakwazi ukuphila iminyaka eyongezelelekileyo. Ngokomzekelo, incwadi ethetha ngale nto ingena nzulu “kwizinto ezinokuphuculwa ngoososayensi” ukuze abantu baphile ixesha elide. Eyoba oososayensi bangade bakwazi ukuyandisa iminyaka umntu ayiphilayo, sakuyibona xa isenzeka.
Ithemba esinalo lokuphila ngonaphakade alixhomekekanga kwisayensi. Xa ithetha ngoMdali wethu, uYehova, iBhayibhile ithi: “Ukuwe umthombo wobomi.” (INdumiso 36:9) Xa wayethandaza uYesu wathi: “Oku kuthetha ubomi obungunaphakade, ukungenisa kwabo ulwazi ngawe, wena ukuphela koThixo oyinyaniso, nangalowo umthumileyo, uYesu Kristu.” (Yohane 17:3) Kucacile ukuba siza kuvuzwa ngeentsikelelo ezingasoze ziphele ukuba sikhonza size sithobele uYehova uThixo noNyana wakhe uYesu Kristu.
Abaphandi bathi ezinye izityalo ezifana nale ngca ziye zaphila iminyaka eliwaka
Ngamafutshane, iBhayibhile ithi abafileyo balinde uvuko engcwabeni. (Yohane 5:28, 29) Abeva zintlungu kuba “abafileyo, abazi nto konke konke.” (INtshumayeli 9:5) Xa wayefundisa, uYesu wafanisa ukufa nobuthongo obunzulu. (Yohane 11:11-14) Ngoko asinasizathu sokuboyika abo bafileyo okanye sibacenge ngokubenzela izinto. Abanakusinceda okanye basenzakalise kuba ‘akukho msebenzi nakuyila nakwazi nakulumka engcwabeni.’ (INtshumayeli 9:10) Noko ke, uThixo uza kubavusa abantu aze akuphelise kuthi tu ukufa.​—1 Korinte 15:26, 55; ISityhilelo 21:4.
Isizathu Sokuba Simele Siyithembe Into Ethethwa YiBhayibhile
Simele siyithembe into ethethwa yiBhayibhile. Ngoba? Nazi izizathu:
Indlela Ekhethekileyo Ebhalwe Ngayo: IBhayibhile ineencwadi eziyi-66 ibe yabhalwa ngabantu abayi-40 kwiminyaka enokuba yi-1 600, ukususela ngo-1513 B.C.E. ukuya kutsho malunga no-98 C.E. Sekunjalo, yonke into eyithethayo iyavisisana. Oku kubonisa ukuba oyena Mbhali wayo nguThixo usomandla. Watyhilela abantu ababeyibhala izinto amabazibhale.
Ithetha Izinto Ezenzekayo: Izinto ezenzekayo ezibhalwe eBhayibhileni ziyavisisana nembali. Incwadi ethi A Lawyer Examines the Bible ithi: “Ngoxa amabali, nobungqina bobuxoki obuchaza iziganeko ezenzeka kwiindawo ezahlukeneyo bungaqinisekanga ngamaxesha ezenzeka ngawo, . . . yona iBhayibhile isinika umhla nendawo echanileyo eyenzeka kuyo loo nto kuthethwa ngayo.”
Ukuchana Kwayo Ngokwesayensi: IBhayibhile asiyoncwadi yesayensi, kodwa xa ithetha ngesayensi, ichaza izinto eziyinyani zingekaziwa ngabanye abantu. Ngokomzekelo, isahluko 13 no-14 sencwadi yeLevitikus, sinemithetho eyayinikwe amaSirayeli yococeko neyokuba umntu onesifo esosulelayo ahlaliswe yedwa. Oku kwenzeka ngaphambi kokuba abantu bazi ngeentsholongwane nezifo ezosulelayo. Kwakhona iBhayibhile ithi umhlaba ungqukuva kwaye awumiswanga phezu kwanto, zinto ezo abaye bazazi emva kwethuba oososayensi.​—Yobhi 26:7; Isaya 40:22.
Le yimizekelo nje embalwa ebonisa indlela enyanise ngayo iBhayibhile xa isithi: “Sonke iSibhalo siphefumlelwe nguThixo kwaye siyingenelo ekufundiseni, ekohlwayeni, ekulungelelaniseni izinto, ekuqeqesheleni ebulungiseni.”​—2 Timoti 3:16.
IBhayibhile inezizathu ezibini ezivakalayo ezisenza siqiniseke ngovuko.